Etu esi eji ogwu na aru ulo aru - Ikkaro
Inicio >> Ugbo >> Ngwakọta >> Otu esi eji ogwu na-eme ogwu ulo n'ime ulo
Maka otu ihe, ịnweghị ike ịtụgharị ma gwakọta ọdịnaya niile nke ọma. na nke ọzọ, ọdịnaya kacha ochie nke na-aghọ compost tupu mgbe ahụ ga-adị na ala ma anyị agaghị enwe ike iwepu ya ma ọ bụrụ na anyị nwere mmasị. Iji zere nke a, anyị nwere ike ịgbakwunye ụfọdụ mgbanwe na mkpọ, na-eitatingomi ụdị azụmahịa. Anyị nwere ike wepu akụkụ niile dị ala, nke mere na ọ dị na kọntaktị na ala ma achọghị ụdị leachate ọ bụla nwere ike ịgbanye compost.
Anyị nwekwara ike belata akụkụ nke akụkụ site na ala wee gbanwee ya n'ọnụ ụzọ nwere mgbatị na mkpọchi ka anyị wee nwee ike ịnweta compost ma ọ bụrụ na anyị chọrọ. Iji tụgharịa ya, anyị agaghị enwe ihe ọzọ anyị ga - eme karịa iji kompị na - atụgharị, nke dị ka nnukwu ọkpọ nwere nkịji aka abụọ a na - adọta anyị na - aga. Mgbe anyị na-ewepụ ya, mbo aka ahụ mepee ma nye anyị ohere ịwepụta ihe na ala wee si otú a dakọtara ma gwakọta ihe niile dị na ikpo anyị.
En njikọ na-esonụ enwere vidiyo banyere -esi mee ka a compoundster, n'ihi na nweta compost dị n’etiti ụbọchị 14 na 21, na-eji paịndị rọba eme ihe. Ọ bụ nnọọ ihe ọkaibe karịa ndị na ihe oyiyi n'elu.
A obere ihe ọmụma banyere esi compost.
Ka anyị were uru mkpofu anyị
Categories Ngwakọta, Ugbo Igodo bọtịnụ
Otu esi eme tosta arụrụ n'ụlọ
Otu esi eme iko 3D anaglyphic
1 kwuru na "Otu esi eji igwe egwu egwuru ulo"
adrian ịga nke ọma
Ọnwa iri 15, 2014 na 1:15 pm
Ezigbo peeji. Ekele si El Bolson Patagonia Argentina.